Twitter no motera fikarohana vaovao | Martech Zone
Twitter no motera fikarohana ahy vaovao
Sabotsy, Martsa 15, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manaraka aho izao Olona 341 ao amin'ny Twitter. Nifandray tamin'ny Twitter aho ary nangataka azy ireo hamela ny 'fanaraha-maso auto'. Midika izany fa raha manaraka ahy ianao dia manaraka anao ho azy aho. Tsy fisehoan-javatra voarakitra an-tsoratra izy io ary tsy misy eo amin'ilay ampahan'ny mpampiasa… fa nisy nilaza tamiko an'io, ka nangatahiko izy ary navelan'ny Twitter tamim-pitiavana.
Betsaka ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet momba ny Twitter ary mety hisy izany na mety tsy be a fandaniam-poana of fotoana.
Rehefa miseho amin'ny alàlan'ny tranonkala ny fitaovana sy ny haitao vaovao dia misy fiovana matetika amin'ny fampiasan'izy ireo izay, angamba, tsy nampoizin'ireo mpamorona azy. Androany vao tsapako fa mampiasa ny Twitter ho Search Engine aho, ary ny fomba ampiasain'ny hafa ho Search Engine. Raha ny fahitako azy dia mety haka ampahany kely amin'ny teknolojia hafa ny Twitter amin'ny farany - angamba ny ohatra isam-paritra ChaCha, ny motera fikarohana ampiasain'ny ati-doha.
Tsy nahazo foana i ChaCha ny tsara indrindra mpanao gazety - ary tena tsy azoko mihitsy hoe inona ilay raharaha momba an'io. Toa tsy mandaitra ny fikarohana tohanan'ny olombelona. Ary angamba izany… raha orinasa ianao fa tsy vondrom-piarahamonina.
Izany dia nilaza fa miavaka ny tombony amin'ny Twitter amin'ny maha-milina fikarohana azy. Nanodidina ahy manokana ireo manam-pahaizana momba ny asa aman-draharaha, namana ary mpiara-miasa izay tiako ny mizara sy mianatra avy amiko. Manaja azy ireo tsy miankina aho, tsy vahiny amin'ny faran'ny tranonkala izy ireo. Ary noho ny isan'ny olona natomboko hanaraka dia nanjary lehibe kokoa - toy izany koa ny kalitao sy ny habetsaky ny valiny azoko rehefa nametraka fanontaniana aho.
Rehefa nanontany momba ny tonian-dahatsoratry ny sary an-tserasera iray aho dia nisy olona roa tonga dia namaly Aviary. Rehefa nangataka a Slideshare safidy hafa (nidina ambany be izy ireo tato ho ato), valiny tsy latsaky ny folo no azoko. ARY, afaka namaly aho ary 'nandamina' ny fanontaniako hahitako ny vahaolana mety. amin'ny Twitter, Azoko atao ny manadio ny fikarohana, mahazo hevitra ary tolo-kevitra haingana araka izay azoko atao raha tsindrio ny valiny vitsivitsy ao Google.
Raha manahy ny hanaraka be loatra amin'ny Twitter ianao, angamba azonao atao ny mieritreritra azy amin'ny fomba fijery hafa. Twitter no Search Engine vaovao ahy.
Tags: Search MarketingTwitterfikarohana ao amin'ny twitter
Lahatsary: ​​Fahatakarana ny Twitter
Ny fandaniam-bola amin'ny marketing dia miova amin'ny fikarohana
Mar 15, 2008 amin'ny 11: 31 AM
Tsy ho toy ny lehilahy eny, fa mifanaraka amin'ny teny rehetra aho. Nahafinaritra ny Twitter tamin'ny fanampiana azy hahita vaovao. Mahatalanjona tokoa ny olona any.
Mar 15, 2008 ao amin'ny 7: PM PM
Doug, rehefa avy namaky ny lahatsoratrao dia niditra hisoratra anarana fotsiny aho. Na izany aza, nisy olona nampiasa ny anarako, ka tsy maintsy manova azy aho. Ny olana fotsiny dia mbola tsy haiko ny fomba hahatongavana ho mpanaraka na ny fomba hanarahana olona. Dratanone no anarako. Azonao ampidirina ao amin'ny lisitry ny mpanaraka anao azafady? Misaotra, Doug.
Mar 15, 2008 ao amin'ny 10: PM PM
Nojereko aho ary manaraka anao aho, toa hitanao fa fantatrao!
Mihobia sy mahita anao ao amin'ny Twitter!
Lahatsoratra tsara Doug ary manaiky aho - mety ho loharano tena izy io! Hanampy anao aho izao!
Mar 16, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
Afaka mampiasa ChaCha amin'ny alàlan'ny Twitter ianao izao. Mandeha http://www.twitter.com/ChaCha ary araho ny twitter. Avy eo raha manao hafatra mivantana ianao (d ChaCha) miaraka amina fanontaniana dia hahazo hafatra mivantana ianao amin'ny valinteninao. Nandefa tariby tamin'ny serivisy valiny an-tsoratra 242242 tao amin'ny Twitter izy ireo.
Mar 16, 2008 ao amin'ny 2: PM PM
Mitovy ny fomba itiavako azy… Angamba ny Fikarohana sosialy. Twitter no hisolo ny SEO… Izany no izy my andrana - manandrama mikaroka ny bilaogiko 😛
Mar 17, 2008 amin'ny 6: 53 AM
Androany vao nanomboka nampiasa Twitter aho. Somary tara teo amin'ilay sarety, saingy hitako tsara ny antony ahitan'ny olon-kafa azy io tena ilaina.
Manantena aho fa salama ianao, Doug.
Mar 17, 2008 ao amin'ny 3: PM PM
Douglas- Mpankafy twitter goavambe koa aho. Izy io dia ahafahanao mifandray amin'ny sombin-javatra kely izay votoatin'ny zavatra eritreretinao na zarainao. Plus Twitter dia feno mpankafy vao haingana sy mpankafy tranonkala. Tsy mbola naheno momba ny fanarahana azy ho azy aho, fa tena endri-javatra mahafinaritra! Misaotra nizara an'io.